Thwebula PPSSPP 1.10.3 – Windows – Vessoft
Isigaba: Emulators yemidlalo
Amazwana ku PPSSPP
PPSSPP software ehlobene
i-ePSXe – isimamisi se-Sony PlayStation yemidlalo yokudlala. Isoftware iqinisekisa ukudlalwa kwama-discs wegeyimu nezithombe zabo besebenzisa izengezo ezahlukahlukene.
I-JoyToKey – isoftware yokulingisa umsebenzi wegundane nekhibhodi kusetshenziswa izinduku zokudlala zegeyimu. Isoftware isekela ukucushwa kokuhlanganiswa okubalulekile kwekhibhodi noma igundane futhi kunikezela ukulingisa kwabo ngaso leso sikhathi induku yokudlala.
I-Dolphin – ithuluzi lokudlala imidlalo ku-GameCube ne-Wii game consoles. Isoftware ithuthukisa ikhwalithi yesithombe futhi inika amandla ukusebenzisa izithonjana zemidlalo.
Cheat Injini – isoftware ewusizo yenzelwe abantu abadlala imidlalo. Isoftware ikuvumela ukuthi ushintshe emidlalweni: izinga, inani lempilo, imali, izikhali, njll.
I-AutoHotkey – ithuluzi lakhelwe ukumisa ama-hotkeys. Isoftware ikuvumela ukuthi uqaphe okhiye bezinkinobho kwikhibhodi, ukuhamba kwegundane nomsebenzi wamanye amadivaysi okulawula.
I-Battle.net – insiza yomdlalo ukusebenzisa imidlalo eBlizzard. Futhi, i-software isekela ikhono lomdlalo ohlanganyelwe nge-inthanethi.
Umdlali wezokuxhumana osekelwa amafomethi athandwayo. Isofthiwe ikuvumela ukuba ungeze amafayela kwisitoreji samafu futhi ubheke kumadivayisi ahlukene.